December 15, 2019 – KTM VMAG
एक समय बलिउडमा एक छत्र राज गरेकी नायिका करिना कपुरले करियरको सुरुवातमा न कुनै अडिसन दिनु पर्‍यो न सङ्घर्ष नै गर्नु पर्‍यो । जीवनमा कहिल्यै फिल्मको लागि अडिसन नदिएकी उनले बलिउड यात्राको १९ वर्षपछि चलचित्रको लागि अडिसन दिएकी छिन् । करिनाले भर्खरै आमिर खानको चलचित्र ‘लाल सिंह चड्डा’का लागि अडिसन दिएकी हुन् । उनले भारतीय […]
सहिमा र सन्दिपको “तिम्रै हुनु छ” सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौं । चर्चित गायिका सहिमा श्रेष्ठ तथा लालुमैका चर्चित गायक सन्दिप न्यौपानेको डान्सिङ बिटमा रहेको नयाँ गीत “तिम्रै हुनु छ” को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल तथा एक पछि अर्को राम्रो राम्रो गीतहरु नेपाली सांगीतिक बजारमा पस्केर सम्पुर्ण नेपाली गीत संगीतको पारखीहरुको रोजाइमा पर्न सफल सुमधुर आवाजकी […]
गिरिसको स्वरमा १२ सत्ताइस गीत सार्वजनिक
नेपाली कथानक चलचित्र ‘१२ सत्ताईस’ को १२ सत्ताइस गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा दिपक आर.जे. र गिरिस खतिवडाको स्वर, प्रकाश मल्लको शब्द र दिपक आर.जे.को संगीत रहेको छ । लाइट कमेडी जनरामा निर्माण भएको यो फिल्मको ट्रेलर समेत सार्वजनिक भैसकेको छ । फिल्ममा पैसा कमाउनको लागि १२ सत्ताइस गर्ने कथा देखाइएको छ । कथा […]
इटलीको एक सहर ब्रिन्दिसीमा दोस्रो विश्वयुद्धको शक्तिशाली ब’म निस्क्रिय बनाउन ५० हजारभन्दा धेरै मानिसलाई विस्थापित गरिएको छ। सहरको दक्षिणी क्षेत्रबाट ५४ हजार मानिसलाई हटाएर उक्त ठाउँ खाली गरिएको हो । स्थानीय मिडियाका अनुसार उक्त बेलायती ब’म एक मिटर लामो र २ सय किलोग्रामको छ । जुन गत नोभेम्बर २ मा सिनेमाको काम गर्ने क्रममा भेटिएको […]
कुकुरको कारण निक र प्रियंकाबीच झगडा ! आखिर के भयो तेस्तो ?
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र उनका पति निक जोन्सले हालै एक तस्बिर इन्सटाग्राममा सार्वजनिक गरे । जर्मन सेफर्डसँग खिचिएको त्यो तस्बिर भाइरल पनि भयो । जहाँ त्यो कुकुरको नाम थियो, गिनो जोन्स। निकका भाइले भनेका छन्, ‘गिनो परिवारलाई विभाजन गर्ने कारण बन्दैआएको छ ।’ निकले भने गिनोको समेत इन्स्टाग्राम ह्यान्डल बनाएर त्यसबाट पनि तस्बिर सार्वजनिक […]
जमाइकाकी टोनी एन्ना२०१९को मिस वल्र्ड
बेलायतमा सम्पन्न विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताबाट जमैकाकी सुन्दरी टोनी एन्ना सिंह विश्व सुन्दरी घो’षित भएकी छन्। २३ वर्षीया जमैकन सुन्दरीलाई क्रिकेट र क्रिस गेलबारे प्रश्न सोधिएको थियो। उनले भारत, फ्रान्स, ब्राजिल र नाइजेरियन सुन्दरीलाई पछि पार्दै विश्व सुन्दरीको ताज पहिरिएकी हुन्। नेपालकी अनुष्का श्रेष्ठ टप १२ बाट बाहिरिएकी थिइन्। अनुष्काले मल्टिमिडया र ब्यूटि एण्ड प्रपोज अवार्ड […]